Izindlela Ezi-10 Eziqinisekisiwe Zokushayela Ithrafikhi Kuwebhusayithi Yakho Ye-Ecommerce | Martech Zone
Izindlela Ezi-10 Eziqinisekisiwe Zokushayela Ithrafikhi Kuwebhusayithi Yakho Ye-Ecommerce
NgoLwesibili, Agasti 20, 2019 NgoLwesibili, Agasti 20, 2019 ULaura Himmer
"Imikhiqizo ye-Ecommerce ibhekene ne-80% Rate Rate"
Yize kunezibalo ezicindezelayo, uLevi Feigenson wakhiqiza ngempumelelo imali engamaRandi ayizigidi ezingama-27,800 ngenyanga yokuqala yebhizinisi lakhe le-e-commerce. UFeigenson, nonkosikazi wakhe, wethule umkhiqizo wezesekeli obiza i-eco-friendly ogama lakhe linguMhie ngoJulayi ka-2018. Kusukela lapho, akusekho ukubuyela emuva kubanikazi kanye nakulo mkhiqizo. Namuhla, uMushie uletha cishe u- $ 450,000 ekuthengiseni.
Kule minyaka yokuncintisana ye-e-commerce, lapho ama-50% wokuthengisa eya ngqo e-Amazon, ukwakhiwa kwetrafikhi, nokuguqulwa kuseduze kokungenzeki. Noma kunjalo, abasunguli be-Mushie babonisa ukuthi akulungile futhi bavula indlela yabo ekukhuleni okungapheli. Uma bekwazi ukukwenza, nawe ungakwenza.
Konke okudingayo ngamasu wokuncintisana ahlanganiswe nezitayela zokubamba ukunakwa esixukwini. Lo mhlahlandlela uveza amasu we-e-commerce kaMushie ahlanganiswe namanye amaqhinga awusizo wokuthola ithrafikhi esitolo sakho sewebhu esinamandla amaningi okuguqulwa.
Izindlela Ezi-10 Zokushayela Ithrafikhi Kuzebhizinisi Lakho Le-E-commerce
1. Tshala imali ku-Influencer Marketing
Ekuqaleni, ngangibhala ngeGoogle Adwords, kepha izibalo zibonisa ukuthi abasebenzisi abavamile ukuchofoza kuzikhangiso njengoba bengasazethembi. Iningi lokuchofoza kwabasebenzisi liya ezixhumanisweni eziphilayo, ezingakhokhiwe.
Uma kungenjalo i-Google AdWords, pho iyiphi indlela esheshayo yokubeka imikhiqizo yakho phambi kwezigidi?
UFeigenson ufinyelele kumakhulu amakhulu nabathonya abancane ukukhuthaza imikhiqizo yakhe. Uthumele imikhiqizo yakhe kuJenna Kutcher, enabalandeli abangama-4000, noCara Loren, nabalandeli abangu-800,000.
Okunye okunye ukufundwa kwamacala obisi lukaSilk Almond ibike ukuthi lo mkhiqizo ukhiqize i-Return Return to Investment ephindwe ka-11 kusuka kumkhankaso wokukhangisa onamandla kunalokho okukhangisa nge-digital banner ads.
Imikhiqizo ye-E-commerce ibheka ukumaketha okuthonya njengokutshalwa kwemali okubizayo. Kepha uFeigenson ugcizelela iqiniso lokuthi awudingi ukuxhumana noKim Kardashian ukusabalalisa igama lemikhiqizo yakho. Vele, kuzokwephula ibhange lakho ngaphandle kwe-ROI. Ngokuphambene nalokho, thola abagqugquzeli be-niche ukuze ufinyelele kumakhasimende afaneleke kunalokho kunoma ngubani nje. Abathonya abakhulu nabancane bayakwazi ukwandisa ithrafikhi ye-e-commerce ngama-ROI aphindwe kayishumi.
2. Isikhundla ku-Amazon
Ngiyazi ukuthi wonke umuntu ukhuluma ngokuma kuGoogle, kepha i-Amazon iyinjini entsha yokusesha ye-E-commerce landscape.
Ngomunye I-USA Today ibika, Abathengi abangu-55% ku-Intanethi Baqala Ucwaningo lwabo ku-Amazon.
UFeigenson ufunga i-Amazon ngokuthengisa kwayo okwandayo kwedijithali. Ukugcwaliseka kwe-Amazon akusizanga nje kuphela ukuthi uFeigenson anakekele uhlu lwayo, kepha futhi kumnikeze nokufinyelela kuzithameli eziningi namathuluzi wokumaketha, njenge-Keyword Research, ukuze akhule kuze kube phakade.
Ngaphandle kwalokhu okunikezwa yi-Amazon, ungazuza ukwethembana okusheshayo kwamakhasimende ngokuqoqa izibuyekezo zangempela zamakhasimende adlule futhi ubhale incazelo eningiliziwe yemikhiqizo yakho.
Manje ungasho ukuthi i-Amazon imbangi yakho. Noma ngabe kunjalo, uzofunda okuningi mayelana nokuthi abasebenzisi bafunani nokuthi kanjani ngedatha yekhasimende le-Amazon.
3. Vulela Amandla we-SEO
Lapha kufika isu lokukhangisa eliyintandokazi ngaso sonke isikhathi labanikazi bezitolo zewebhu. Kusukela ekwazini amakhasimende ukubhala ibhulogi ukukhuthaza e-Amazon ukubeka # 1 ku-Google, i-SEO idlala indima ebaluleke kakhulu esigabeni ngasinye.
"U-93% weTotal Web Traffic uqhamuka kwa-Search Engine."
Lokho kusho ukuthi i-SEO ayinakugwenywa. Akunandaba ukuthi ukumaketha kwezokuxhumana kukhuphukela phezulu kangakanani, abasebenzisi basavula iGoogle ukusesha imikhiqizo abafuna ukuyithenga.
Ukuqala nge-SEO, kufanele uqale ngamagama angukhiye. Qala ukuqoqa amagama angukhiye abasebenzisi ababeka kuGoogle ukusesha imikhiqizo efanelekile. Sebenzisa isihleli segama elingukhiye le-Google ukuthola usizo olwengeziwe. Noma ungathatha futhi izeluleko kusuka kuthuluzi elikhokhelwe njenge-Ahrefs for amaqhinga we-SEO athuthukile.
Sebenzisa wonke amagama wakho angukhiye aqoqiwe kumakhasi wakho womkhiqizo, ama-URL, okuqukethwe, nanoma yikuphi lapho amagama adingeka khona. Qiniseka ukuthi awungakhubeki ekufakweni kwegama elingukhiye. Zisebenzise ngokwemvelo ukuze uhlale uphephile kusuka ezinhlawulweni ze-Google.
4. Hlela Okuqukethwe
Awukwazi ukubhala lutho, ukukushicilela, futhi unethemba lokuthi izethameli zizocula izingoma zemikhiqizo yakho. Futhi, awukwazi ukuthembela kuphela kuma-athikili ukusabalalisa ukuqwashiswa kwemikhiqizo yakho. Okuqukethwe kweqe imikhawulo yamagama abhaliwe. Ama-Blogs, amavidiyo, izithombe, ama-podcast, njll. Konke kubalwa ngaphansi kwesigaba sokuqukethwe. Ukwenziwa kokuqukethwe okungahleliwe kuzokudida maqondana nalokho okuzokwakha, ukuthi uzokwakha kanjani, nokuthi ushicilele kuphi. Kungakho isu lokuqukethwe kumele longe isikhathi sakho futhi likhiqize ithrafikhi elungile kusuka eziteshini ezifanele.
Okokuqala, bhala phansi amafomethi ahlukile wokuqukethwe okudingayo. Isibonelo,
Imibhalo ngokusetshenziswa nezinzuzo zemikhiqizo
Noma yini onayo ku-arsenal.
Nikeza umsebenzi kumbhali, umklami, noma noma ngubani odlala indima enqubweni yokwakhiwa kokuqukethwe. Beka umfana ophethe ukuze athole okuqukethwe ngesikhathi futhi akushicilele endaweni efanele. Isibonelo, uchwepheshe we-SEO kufanele anakekele i-athikili ezoshicilelwa kubhulogi yenkampani futhi iphromothwe ezinkundleni zokuxhumana.
5. Memezela uhlelo lokudluliselwa
Ngisazikhumbula izinsuku lapho i-Amazon yayintsha ku-e-commerce, ingithumela ama-imeyili ukuthi ngidlulisele isayithi kubangani bami ngenzela imali. Kwakuyiminyaka edlule. Isu lisasebenza namanje ukuthambekela kwezitolo ezintsha ze-e-commerce noma labo abafuna ukuthola ukudonsa okusheshayo. Eqinisweni, kulesi sikhathi semidiya yokuxhumana lapho ukuhlanganyela kuyisiko lansuku zonke, wonke umuntu uthanda ukuzama ithuba lokuzuza izinzuzo ezimbalwa ngokushintshanisa izingosi zokudlulisela kubangani babo. Abangani bami bezokuxhumana bayakwenza ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke ngiqinisekile ngaleli qhinga.
I-6. Ukuthengisa nge-imeyili
Ukumaketha nge-imeyili kusenamandla wokweba lo mbukiso, ikakhulukazi kumasayithi we-E-commerce. Ngokumakethwa kwe-imeyili, ungangenisa imikhiqizo emisha kumakhasimende akho esikhathi esedlule ukuze kukhiqizwe ngokushesha izimoto. Kukuvumela ukuthi usakaze ukuqwashiswa kwewebhusayithi yakho. Ukumaketha nge-imeyili kungenye yeziteshi ezithandwayo zokukhuthaza okuqukethwe, ukufika okusha, noma izaphulelo. Futhi ungakhohlwa lezo zinqola ezilahliwe, lapho abasebenzisi bengeza khona imikhiqizo enqoleni kodwa bangalokothi bachofoze ekuthengeni. Ngokumaketha nge-imeyili, ungathatha abasebenzisi esiteji sokugcina sokuthenga umkhiqizo.
Nasi isibonelo se-imeyili sabasebenzisi bezinqola abalahliwe:
7. Setha Ubufakazi Bomphakathi
Cishe ama-70% wabasebenzisi be-Inthanethi babheka ukubuyekezwa komkhiqizo ngaphambi kokuthenga.
Ukubuyekezwa komkhiqizo kuthembeke kakhulu izikhathi eziyi-12 ngokungafani nezincazelo zomkhiqizo nekhophi yokuthengisa.
Ubufakazi bezenhlalo kuwubufakazi kumakhasimende, avela kumakhasimende adlule, ukuthi angawethemba umkhiqizo nomkhiqizo wakho. I-Amazon igcwele ubufakazi bomphakathi. Ngokwengeziwe, ubufakazi bezenhlalo bunomthelela kokuqukethwe futhi, ukondla ukufuna kwezinjini zemininingwane yokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi.
Akumangalisi ukuthi i-Amazon iphakeme kakhulu ngemikhiqizo yayo eminingi.
Qala ukuqoqa izibuyekezo noma ngabe kudinga utshalomali oluncane. Isb., Klomelisa amaklayenti akho adlule ngokuthumela izibuyekezo ngezithombe noma ngamavidiyo ukuze uthole umfutho osheshayo kuthrafikhi futhi uzuze ukwethembana okusheshayo kusuka kumakhasimende amasha.
8. Bonisa Up on Social Media Iziteshi
Imithombo yezokuxhumana yikhaya lesibili labasebenzisi.
AbakwaSalesforce babike ukuthi ama-54% ezinkulungwane zeminyaka asebenzisa iziteshi zemithombo yezokuxhumana kwimikhiqizo yocwaningo.
Ukukhuluma ngami, izikhangiso ze-Instagram (njengamavidiyo) zingithonya kalula ukuthi ngithenge umkhiqizo noma ngibhalisele ubulungu. Ngakho-ke ngingasho ukuthi iziteshi zemidiya yokuxhumana nabantu zingaba yinguqulo encane yesitolo sakho se-e-commerce. Dala izitolo eziteshini zemithombo yezokuxhumana lapho kuhlala khona izithameli zakho futhi ushicilele okuqukethwe ngokungaguquki. Yenza izikhangiso futhi ukusabalalisa ukuqwashisa nokushayela ithrafikhi esheshayo.
9. Beka Abadayisa Kakhulu Phambili
Isizathu sami esibalulekile sokugxumela e-Amazon lapho sicwaninga ngomkhiqizo ukubona abathengisi abanezibuyekezo eziphezulu. I-Amazon yakhe lesi sici kahle kakhulu. Bengifuna uwoyela kakhukhunathi ongcono kakhulu. I-Amazon inginike isizathu esihle sokuyithenga kumthengisi othengisa kakhulu.
Ngalesi sici kuphela, angidingi ukumba ngijule lapho kufanele ngithenge khona umkhiqizo. Futhi ngithola isikhathi esanele sokufunda izibuyekezo kumkhiqizo onconyiwe.
Ngokubonisa imikhiqizo ethengiswa kakhulu kunazo zonke, ukhombisa abasebenzisi ukuthi abanye bathengani nokuthi kungani kufanele bazame. Kuyindlela efakazelwe yokudlulisa ukunakekelwa kwakho - ukwenyuka kokuthembela kwabasebenzisi, okunika isinqumo sabo sokuthenga.
Faka imikhiqizo yakho ngezigaba bese ukhipha imikhiqizo ethengisa kakhulu. Zihlelele ukuthi zize ngaphambili lapho abasebenzisi befuna amagama angukhiye afanayo. Maka imikhiqizo ethengiswa kakhulu enegama elifana nokukhethwa komkhiqizo noma kunconyiwe abasebenzisi.
10. Nikeza Ukuhanjiswa kwamahhala ngemuva komkhawulo othile
Beka umkhawulo othize wokuthumela kwamahhala. Isibonelo, “Ukulethwa kwamahhala kuma-oda angaphezulu kwe- $ 10”Noma yiliphi inani olikhethayo.
Le isebenza kahle kakhulu lapho ufuna ukuthinta abasebenzisi ngokwengeza izinto eziningi ohlwini ngaphandle kokubaphoqa.
Zonke izindlela okukhulunywe ngazo ngenhla kulula ukuzisebenzisa. Ezinye zazo zithatha isikhathi ngenkathi ezinye zingaqala ukusebenza ngokushesha. Sebenzisa isikhathi esincane sokuthatha imisebenzi manje, bese ubeka iqembu lakho ukuthi lisebenzele imisebenzi edla isikhathi. Buya uzongitshela ukuthi iyiphi oyithande kakhulu. Ngikufisela okuhle.
Tags: AmazonUkukhangisa Okuqukethweukushayela ukuguqulwaukushayela ithrafikhie-commerceezokuhweba ngekhompyuthaimeyili Marketingukumaketha kwamathonyaukusesha okuphilayoukudluliselwaseoubufakazi bezenhlalakahle
ULaura Himmer ungumhleli omuhle. Indawo yakhe ye-niche yi-Marketing Guide, i-Fashion blogging, Indlela Yokuphila nokubhala okukhuthazayo. Ungumuntu othanda ukuqina futhi uthanda i-yoga. ULaura ungowesifazane ongesabi futhi othanda ukuzijabulisa.
Iscreen se-Uscreen: I-Video On Demand ne-Native TV App Platform
Ngabe Singacela Ukubulala Inganekwane Yesikhathi Esinakwa?